Qaabka caatada ah ee muraayadda Xakamaynta Qufulka albaabka
Caannimada qaababka ugu yar, albaabbada muraayadaha caatada ah ayaa si sii kordheysa u qabsanaya booska caadiga ah ee suuqa hagaajinta guriga sababtoo ah hufnaantooda heer sare ah iyo dareenka sare.
Si kastaba ha ahaatee, qufulka albaabka galaaska ee suuqa waa ay adag tahay in ay la mid noqdaan albaabada muraayadaha caatada ah.Iyada oo loo marayo cilmi-baaris badan oo suuqa, YALIS waxay ogaatay in macaamiisha albaabka muraayadda caatada ah ay la kulmeen dhibaatooyin sida qaab-dhismeedka gudaha ee aan habboonayn, doorashooyin yar, iyo qaabab aan isku mid ahayn iyo wixii la mid ah.Sababahan dartood, YALIS waxay isku daraysaa shaqaynta iyo farshaxanka albaabka muraayadda qufulada iyo albaabada caatada ah ee muraayadaha, iyadoo ilaalinaysa daah-furnaanta iyo dareenka-dhamaadka sare ilaa ugu badnaan.
BADAN iyo kabiyeyaasha dhalooyinka waxaa lagu sameeyay astaanta aluminium waxaana lagu farsameeyay mashiinnada CNC.Ma aha oo kaliya saxnaanta qalabyada waa mid sarreeya, laakiin sidoo kale waxaa la samayn karaa isla dhammayn la mid ah qaabka albaabbada muraayadaha caatada ah, si albaabbada muraayadda iyo albaabbada muraayadda lagu gaaro saameyn midaysan.
1. Qaab dhismeedka xajinta ee rukhsadda leh waxa uu ka hortegi karaa furista rabshadaha waxa uuna ka ilaalin karaa gacanku in ay soo laadlaadsanaadaan.
2. MULTIPLICITY wuxuu ku habboon yahay qufulka xadhkaha magnetic, waxay yarayn kartaa qaylada marka albaabka gacanta la furo oo la xiro.
3. Ku habboon albaabbada hal galaas ah iyo albaab laba-glazed ah.
4. Kiiska shaqo joojinta la hagaajin karo wuxuu yarayn karaa dhibka rakibidda.
Iyada oo ay caan ku yihiin albaabbada muraayadaha caatada ah, qaar badan oo ka mid ah kuwa wax soo saara ee albaabbada dhalada ah ayaa alaabadooda ka dhigaya kuwo la jaan qaadaya dookhyada macaamiisha, laakiin isla mar ahaantaana waxay ogaan doonaan in qalabka albaabku aanu ka dhigi karin alaabtooda mid tartan iyo faa'iido leh.Sidaa darteed, YALIS waxa ay samaysay quful gacanta albaabka galaas oo taxane ah oo Guard ah oo loogu talagalay albaabo caato ah.
1. ILAALIYAHA waxa lagu rakibay qufulka xadhkaha magnetic, ka dhig furitaanka albaabka aamusan.
2. Qalabku waa aluminium aluminium, kaas oo lagu samayn karo isla dhammaystirka albaabka muraayadda.
3. Rosette waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo xajmiga albaabka muraayadda si loo daboolo baahiyaha macaamiisha.
4. Ku habboon albaabbada hal muraayad leh.
A: Kabida Dhalada+YALIS Albaabka Gacanta
90mm Kabiyaha Dhalada labajibaaran+YALIS Albaabka Gacanka
1. Maaddadu waa zinc alloy.
2. Ku habboon albaabbada muraayadda hal-glazed ah iyo albaab laba-glazed ah.
3. Shaqada qarsoodiga ah iyo shaqada gelitaanka waa la dooran karaa.
B. B Glass Kabid+YALIS Albaabka Gacanta
1. Kabitaanka muraayadda waxay leedahay xargo caag ah oo lagu dhisay si looga hortago muraayadda wasakhaysan.
2. Ku habboon albaabbada hal galaas ah iyo albaab laba-glazed ah.
3. Waxa la is waafajin karaa dhammaan gacan-qabsiga albaabka YALIS.
4. Shaqada gaarka ah iyo shaqada gelitaanka waa la dooran karaa.
5. Waxay la mid noqotay qufulka mortise-ka ee aamusan.